Purism Inozivisa Zvikwereti zveRibrem Laptops ayo | Linux Vakapindwa muropa
Kuchena kwakazivisa nhevedzano ye discounts kune ako Librem malaptop nechivimbiso chekuti vanozotumirwa nekukurumidza pavanongodzoka muzvitoro.
Librem 15 inowanikwa ne $ 200 dhisikaundi yeyakajairwa $ 1,599 kumisikidzwa, nepo Librem 13 iine $ 150 dhisikaundi, iyo inosiya mutengo uri pa $ 1,249 panzvimbo pemutengo chaiwo we $ 1,399.
Ehezve, Purism yakashandisa chiitiko ichi kutaura pamusoro pemalaptop avo, vachiona kuti ndezvigadzirwa zvakavanzika uye zvakachengeteka nekuti vanouya nekuchinja kwemuviri kudzima redhiyo, maikorofoni uye kamera, zvakare ine rutsigiro rweLibrem Key, Pure OS uye Pureboot yekutsiva binary firmware.
La Librem 15 vhezheni 4 Iyo inouya ne 15.6-inch skrini ine resolution ye 3840 x 2160 pixels uye inofambiswa neIntel Core i7 7500u processor inogona kuenzaniswa ne32 GB ye RAM. Padivi remifananidzo, Intel HD 620 kadhi yemifananidzo inowanikwa uye iri mukuchengetedza, une 2.5-inch hard drive uye maviri M.2 disk slots.
Iyo yepamusoro-chinzvimbo sarudzo ine yakavhenganiswa 2TB SSD uye 2 TB NVMe drive uye mutengo wayo unowedzera kusvika $ 1,550.
Chidiki Librem 13 vhezheni 4 Iyo inouya yakashongedzwa ne13.3-inch screen, resolution yepamusoro ye 1920 x 1080 ine Intel Core i7 7500U processor, uye yakakwira 32 GB ye RAM. Iyo GPU zvakare iri Intel HD 620 uye ine imwecheteyo sarudzo dzekuchengetedza sehanzvadzi yayo hombe.
Sekureva kwenzvimbo yepamutemo, Librem 15 haisisipo uye inotarisirwa kusvika imwe mwedzi Iyo Librem 15, kune rimwe divi, inotakura mumazuva gumi ebhizinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Purism inozivisa zvidzikiso pamalaptop ayo eLibrem